Hivavaka amin'ny Ray amin'ny fanahy sy fahamarinana...
Alatsinainy 09 nôvambra 2020 — Ny nitokanana ny Bazilika ao Latran — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 4, 19-24 — Fidiko sy hamasiniko hatramin'izao ity trano ity, hoy ny Tompo, hitoeran'ny Anarako mandrakizay.
Masindahy Geoffroy d'Amiens
Naseho ny : 8 novambra 2020
08 nôvambra — Teraka tao Moulincourt, diôsezin'i Soissons i Geoffroy na i Godefroy. Fanta-daza tamin'ny hatsaram-panahy sy ny fitiava-namana ny fianakaviany, izay manam-boninahitra teo an-tanana ihany koa. Nanavotra fiangonana maro ny fianakaviany, ary saika hita hatrany izy ireo amin'ny fanaovana asa soa amin'ireo fadiranovana mila izany.
Inty tamy ny mpampakatra...
Alahady 08 nôvambra 2020 — Alahady faha-32 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 25, 1-13 — Miambena sy mivonòna ianareo fa ho avy amin’ny ora tsy ampoizinareo ny Zanak’Olona.
Naseho ny : 7 novambra 2020
07 nôvambra — Teraka tao Steisslingen, Allemagne i Ernest, ary mbola tanora izy no niditra tao amin'ny fikambanan'ny Bénédictins tao Zwiefalten tao amin'ny farihin'i Constance. Nitantana io trano fitokana-monina io izy ny taona 1141 ka hatramin'ny taona 1146.
Pejy 10 amin'ny 181